Jilli Raashiyaa fi Yukireen Beelarus keessatti yeroo mari'atan, Bitootessa 7, 2022
Ministriin haajaa alaa Yukireenii Dymytroo Kuleebaa fi giti isaanii kan Rashiyaa Sergeey Laavroov walitti bu’iinsa Yukireen waliin jiruuf furmaata diplomaasummaa arguuf kamisa har’aa Turkii keessatti wal arganii jiran. Kunis erga Mooskoon biyya hollaa isee torban lama dura weerartee as wal ga’ii sandarkaa ol aanaa ti.
Bakka bashananaa kibba Turkii keessatti marii geggeessame kana irratti ministriin haajaa alaa Turk Mevluut kavuusogluu argamaniitu. Turkiin torbanneenii qabee garee lamaan walitti araarsuuf fala barbaadaa turte. Marii diplomaasummaa sadarkaa ol aanaa kamisa har’aa fooya’ina hiika qabu argamsiisa jedhanii kan eegan garuu hagas miti.
Xumura marii sanaa irratti ministriin haajaa alaa Yukireen Dmytro Kuleba tuuta oduuf ibsa kennaniin, isaanii fi Laavroov sa’aatilee 24f lola dhaabinsa tolchuu gama ilaaleen fooya’inni argame hin jiru jechuu dhaan hanga Yukireen harka kennitutti Raashiyaan haleellaa kan itti fufutu fakkaata, sana immoo Kiiyiv hin gootu jedhan.
Ministriin dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroof addatti ibsa kennaniin, duulli waraana Rashiyaa akka karoorfametti deemaa jiraachuu isaa fi warreen gama dhiyaa Yukireeniin ilaalchisee amala balaa qabu agarsiisaa jriu jedhan.
Kaka’umsi Turkii walitti bu’iinsa hammaataa jiruuuf furmaata barbaaduuf yaalii diplomaasummaa geggeessamaa jiran hedduu keessaa tokko. Israa’elii fi Ferensaay kallattiin prezidaantii Raashiyaa Vilaadmir Putin waliin dubbachuu dhaan furmaata arguuf abdii kan qaban ta’uu ibsaniiru.
Haleella hospitaalaa Yukireen kan kutaa da’umsaa magaalaa Mariiyupul irratti haleellaa samii irraan raawwatameen daa’ima tokko dabalatee yoo xiqqaate namoonni sadii du’uu angawoonni Yukireen beeksisaniiru.
Raahyaan ennaa Yukireeniin weerartetti siivilota irratti fuuleffachuu ishee haaluu dhaan haleellaan hospitaala da’umsaa irratti raawwate jedhu oduu kijibaa ti jette. Biilsi sun hospitaala da’umsaa duraanii fi kan amma loltootaan qabamee jiru jettee jirti.
Prezidaantiin Yukireen Volodimiir Zeleniskii haleella hospitaala sana irratti raawwatame fixiinsa sanyii ti jechuu dhaan NATON Yukireen keessatti godinaa balaliin irraa dhorkame akka tolchu irra deebi’uun gaafatanii, aangoo qabdu garuu namummaatu isinitti hanqataa waan deemu fakkaata jedhan.
Walitti Bu’iinsi Sudaan Kibbaa Keessaa Lubbuu Galaafate
Dubartoomii Biyyaa Meeksikoo Hokkora Saalaa balaaleffataniiru
Koroonaan lubbuu Miiliiyoonii Jahaa ol galaafateera
Prezidaantin Afrikaa Kibbaa loogii malee dhaabbachuu irratii cichaniiru